Fitaovana roa tsara hanadino ny NVIDIA sy ny AMD GPU ao ambanin'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Fitaovana roa tsara hanadino ny NVIDIA sy ny AMD GPU-nao eo ambanin'ny Linux
Betsaka ny fomba atao manodinkodina ny CPU sy GPU anay ao amin'ny fizarana GNU / Linux. Ary na dia izao aza izahay dia hifantoka amin'ny fametahana ny GPU, mba hilazana fa raha mieritreritra ny hanao an'io fanao io amin'ny solosainao ianao, ny zavatra voalohany dia ny fiheveranao ireo loza mety hitranga, satria hametraka ny rafitra amin'ny ny mari-pana sy ny adin-tsaina ambony kokoa, izay afaka mampihena ny fiainany ilaina, indrindra raha tsy manatsara ny fampangatsiahana araka ny tokony ho izy ianao. Noho izany, raha tsy fantatrao izay ataonao, dia aza manandrana ity karazana fampiharana ity ...
Efa misy torolàlana vitsivitsy momba ny overclocking na ny microprocessor na ny ny karatra sary ao amin'ny tamba-jotra, ary mazava ho azy fa misy koa izy ireo mamaritra ny fizotrany tsikelikely amin'ny distro Linux. Eto ihany no hanolorako anao dia fomba roa na fitaovana tsara hanamboarana azy ireo amin'ny fomba milamina kokoa, na dia afaka manomana lahatsoratra iray aza izahay ho toy ny torolàlana feno hilazana ny fizotran'ny dingana tsirairay amin'ny GPU sy CPU (Soratako ho amin'ny ho avy izany).
Ho an'ny AMD GPUs: Ho an'ny AMD GPUs dia mamporisika anao handeha amin'ny mpamily open source AMDGPU aho. Raha te hahalala ny fizotrany ianao dia ho hitanao fa tsy sarotra mihintsy, raiso fotsiny ny fepetra mety hifehezana ny mari-pana sy hanatsarana ny fampangatsiahana mba hisorohana olana. Ny dingana overclocking dia hanaraka dingana tsotra vitsivitsy araka ny hitanao ao ity mpitari-dalana ity. Manoro hevitra ireo fitaovana famenon-javatra sasany toa an'ity avy ity koa aho GitHub… Raha ny AMDGPU Pro dia tsy ho afaka ianao.
Ho an'ny GPU NVIDIA: Raha manana karatra sary NVIDIA ianao dia ho hitanao fa mety ho tsotra kokoa ny zava-drehetra, satria ho hitanao koa ireo fitaovana misy sary miaraka amin'ireo GUI izay somary mailaka kokoa hikirakira azy. Toy ny tranga Nvidiaux.
Samy amin'ny tranga iray na iray hafa, afaka overclock sy underclock ianao, ity farany raha sanatria ka te hampihena ny maripana na ny fanjifana angovo ny fitaovanao ianao raha tsy mila fampisehoana be loatra. Na dia ny mahazatra indrindra aza dia ny voalohany, indrindra ho an'ireo izay manao fitrandrahana ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Fitaovana roa tsara hanadino ny NVIDIA sy ny AMD GPU-nao eo ambanin'ny Linux
Ahoana ny fomba hamoronana volavola LVM fototra amin'ny fizarana Linux?
Nilaza ny tompon'andraikitra ao amin'ny Red Hat fa ny IBM dia tokony hamela ny kolontsaina loharano misokatra